'Ihe ngosi Dogo nke Hejaz Mere Ihe Akụkọ' RayHaber
HomeỤWAAsia962 Jordan'Razọ ụgbọ njem Hejaz mere ihe akụkọ ya na Ihe Ngosipụta Ser Exhibition Held in Jordan
09 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 962 Jordan, Asia, ỤWA, ụgbọ okporo ígwè, Foto, General, Isi akụkọ 0
ihe ngosi njem ugboala hejaz na urdunde ya na mmeghe mepere
Ihe ngosi a "Site na Istanbul rue Hijaz: icazọ ụgbọ oloko Hicaz ya na Akwụkwọ" nke thelọ Ọrụ Nkwado na Nchịkọba nke Turkey (TIKA) na Yunus Emre Institute (YEE) mepere na Irbid, obodo nke abụọ kasị ukwuu na Jọdan.
Ahaziri ya na TIKA na YEE na June gara aga, nkwụsị nke abụọ nke ihe ngosi, nke emere n'isi obodo Amman, bụ Irbid, otu n'ime obodo ndị dị mkpa na Jọdan. Mmeghe nke ihe ngosi 19. Ọ bụ onye nnọchi anya Turkey si Amman Murat Karagöz na Dar As Saraya Museum, nke wuru dika ebe Ottoman bụ ebe ewusiri ike na narị afọ nke 16.
Na mmalite ya okwu, nke 2020 afọ, "Jordan Mutual Turkey Culture Year" kwuru nnochite eti na Karagoz a na-ekwu, ihe ndị ga-anọgide na-haziri, o kwuru.
Karagöz gbakwunyere na a na-arụ ọrụ mweghachi na ọdụ ụgbọ elu Amman site na TİKA nakwa na ịrụ ụlọ ebe a na-edebe ihe mgbe ochie, nke ga-akọwa akụkọ ihe mere eme nke okporo ụzọ Hejaz, na-aga n'ihu.
N'ime usoro ihe omume ahụ, e gosipụtara akwụkwọ na foto na 100, nke dịgidere site na ebe ochie Ottoman. N ’ihe ngosi, II. Ihe onyinye Abdulhamid butere bụ onyinye, akara telivishọn, mmekorita ndị gọọmentị, eserese akụkọ ihe mere eme na foto ndị mmadụ na-akwado ha ma n'ime ala ndị Ottoman.
Ndị agbụrụ Arab na Turkmen, ndị ọchụnta ego, ndị agụmakwụkwọ, ndị ọrụ gọọmentị na ndị ọbịa Turkey na Jordani bi na Irbid bịara ya.
Hejaz okporo ụzọ
Sultan II. E wuru ya n’agbata Damaskọs na Medina n’agbata 1900-1908, nke Abdulhamid Khan kwuru banyere jazọ Ojiko Hejaz dịka dı rọrọ m ochie. Eruchara ahịrị site na Damaskọs rue Medina na Amman na 1903, Maan na 1904, Medayin-i Salih na 1906 na Medina na 1908.
Ewuchara okporo ụzọ ụgbọ oloko ahụ n'oge a na-anabata ya n'agbanyeghị oke ihe isi ike nke oke ọkụ, unwu ala, ụkọ mmiri na enweghị ala.
Hicaz Railway, otu n'ime ọrụ kacha mkpa nke oge ahụ, sitere na onyinye ndị enyere ndị Alakụba bi na mpaghara ala dị iche iche nke ụwa wee bụrụ ọrụ gosipụtara ịdị n'otu nke ndị Alakụba ma ghọọ ọrụ na-egosipụta ịdị n'otu nke ndị Alakụba. Enyere 1 / 3 site na onyinye na 2 / 3 site na ego ndị ọzọ.
Na mgbakwunye na iwepụta agha dị mkpa, ndọrọ ndọrọ ọchịchị, akụ na ụba na nke mmekọrịta ọha na eze maka Alaeze Ukwu Ottoman, ụgbọ ala belata ruo ụbọchị iri anọ na ise nke njem, nke were ihe dị ka ụbọchị iri anọ na ụbọchị iri ise site na Makka gaa Syria.
Tika na-ewu Hijaz Railway Museum na Jordan 28 / 03 / 2016 Ikwesịrị ịmepụta Hicaz Railway Museum na Jordan: Turkish Cooperation and Coordination Agency (TIKA) ga-eweghachi ma gbanwee okporo ụzọ ụgbọ okporo ígwè Hicaz Railway n'ọdụ ụgbọ mmiri dị na Jordan. Ụlọ Minista Minista Minista Ahmet Davutoğlu ga-emeghe TİKA Amman. Ọ bụ ezie na TİKA malitere ịrụ ọrụ na Jordan, ọ na-arụ ọrụ dị mkpa na mba ahụ na ọrụ ya. N'ebe a, TIKA na-arụ ọrụ na ọtụtụ ebe site na agụmakwụkwọ na mweghachi, nlekọta ahụike na enyemaka mmadụ. II. Awara okporo ụzọ Hejaz, otu n'ime ọrụ dị mkpa nke Abdulhamid Khan, dị n'etiti Damaskọs na Medina dị n'etiti 1900-1908 afọ. 1 September ọnwa
Medina Station, Ikpeazụ Ikpeazụ nke Akụkọ Ihe Mere Eme Hijaz Railway 27 / 08 / 2018 Ala Medina, nkwụsị ikpeazụ nke okporo ụzọ okporo ụzọ Hejaz, nke e wuru n'oge ọchịchị nke Abdulhamid, gbahapụrụ ya ruo ọtụtụ afọ, ma ghọọzi nnukwu ụlọ egwu egwu. Enwere ike ikiri ihe nkiri na-egosi na egwu Western. 2 SULTAN. Medina bụ otu n'ime ụzọ kachasị mkpa nke okporo ụzọ okporo ụzọ Hejaz, nke Abdulhamid wuru ma were ọtụtụ puku ndị pilgrim kwa afọ. N'agbanyeghị niile mgbalị nke Turkey na-adịghị ekwe ka reopen na Hejaz Railway Station, bụ nke na-ikpeazụ stop nke Medina, mgbe a hapụrụ ruo ọtụtụ afọ ugbu a ọ na-e ghọọ ghe oghe Cabaret akara aka. Ebe a dị otu kilomita site na Masjid al-Nabawi na Medina, ebe ọtụtụ narị puku ndị Alakụba na-aga ebe a
Taa na akụkọ ihe mere eme: 6 March 1908 N'oge okpomọkụ, ọnụ ọgụgụ ndị agha na-eje ozi na Hejaz Railway a mụbara ruo 15 puku. 06 / 03 / 2012 N'oge okpomọkụ nke 6 March 1908, ọnụ ọgụgụ ndị agha na-eje ozi na Hejaz Railway mụbara ruo 15 puku. N'ọnwa June, agbụrụ nile megidere ụgbọ okporo ígwè ahụ na-emekọ ihe ọnụ ma banye na ọgụ.
1900 Hicaz Railway Exhibition Mepee na KBU (Foto Foto) 10 / 10 / 2013 E mepere 1900 Hicaz Railway Exhibition na KBU: Ụlọ Ọrụ Ọkà Mmụta Nkà na Ụzụ nke Ụlọ Akwụkwọ Anyị na 11th. N'ime usoro ihe omuma nke International Rail Systems Engineering Symposium, cı Hicaz Railroad si 60 ruo taa Bugün ihe ngosi meghere Onye Nyocha Onye nkụzi Mustafa Gezici na Nkà Injinia Muhammed Nuri Kömeç ebe e gosipụtara foto 1900. ngosi; Karabük Gọvanọ İzzettin Küçük, Rector anyị. Dr. Burhanettin Uysal Karabük Provincial Police Director Oktay Keskin, Turkey Railways Education na Ọzụzụ Department Head Dr. Kasım Özdemir, KARDEMİR AŞ. Fadıl Demirel, General Manager nke TÜDEMSAŞ A.Ş. Yildiray KOÇARSLAN, Deans, Ọmụmụ na Nlekọta ọrụ Ünivers
Tika na-ewu Hijaz Railway Museum na Jordan
Medina Station, Ikpeazụ Ikpeazụ nke Akụkọ Ihe Mere Eme Hijaz Railway
Taa na akụkọ ihe mere eme: 6 March 1908 N'oge okpomọkụ, ọnụ ọgụgụ ndị agha na-eje ozi na Hejaz Railway a mụbara ruo 15 puku.
1900 Hicaz Railway Exhibition Mepee na KBU (Foto Foto)
Hamidiye-Hejaz Railway Photography Ngosi meghere
Taa na akụkọ ihe mere eme: 4 June 1900 nyere 50 puku pound na Sultan Abdulhamid's Hejaz okporo ụzọ.
Taa na akụkọ ihe mere eme: 15 September 1917 650 rail, 4 bridge and telegraph mast were sabotaged na Hejaz okporo ụzọ ...
Taa na akụkọ ihe mere eme: 8 February 1918 1100 rail, 12 bridge, 25 telegraph pole on Hejaz Railway ...
Taa na History: 6 March Nọmba ndị agha na-eje ozi n'okporo ụzọ Hejaz n'oge okpomọkụ nke 1908 ...